စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေ ~ Nge Naing
စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေ
Monday, March 21, 2011 Nge Naing 62 comments
လူတယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ပြီး စစ်ခွေးတွေ.. စစ်ခွေးတွေ..စစ်ခွေးတွေ..လို့ ဒေါနဲ့ မောနဲ့ ကျွန်မလို ဘယ်သူပြောဖူးလဲ။ ကျွန်မ လူတယောက်မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကို ကြည့်ပြီး စစ်ခွေးတွေ၊ စစ်ခွေးတွေလို့ အသံကုန် ဟစ်အော်ပြီး ပြောခဲ့ဖူးလို့ ကျွန်မ မျက်လုံးမှာ မီးပွင့်လုမတတ် နာကျင်အောင် တုံ့ပြန်ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒီလို ခံရမှုအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုက ခဏတာ ဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ မကျေနပ်နိုင်၊ အခဲမကျေနိုင်တဲ့ ရင်ထဲက နာကျင်မှုက ကျွန်မကို နှစ်ချီပြီး ခံစားရစေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရစမြဲဆိုတဲ့ ဘုရားဟော ဓမ္မသဘောအရ အချိန်တန်တေ့ာလည်း အဲဒီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုတွေ အားလုံးက အလွမ်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး အလွမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်နေတာ အခုချိန်ထိပါပဲ။
၈၈ ရဲ့ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့နောက်ပိုင်းမှာ တနိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ခန်းနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို လူတိုင်းသိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့ရွာကနေပြီး သုံးလေးမိုင် ဝေးတဲ့ မြို့က အထက်တန်းကျောင်းမှာ သွားတက်နေတဲ့ အတန်းကြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အားလုံးက ညီညွတ်ပြီး ကျွန်မတို့ကျောင်းရှိရာ မြို့မှာ ဆန္ဒပြသွားရဖို့အရေးအတွက် မသွားရင် မဖြစ်ဘူး အားလုံးနဲ့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်မို့ မသွားရင် ကျောင်းထုတ်ခံရမယ်လို့ မိဘတွေကို လိမ်ပြီး သွားခဲ့ရပါတယ်။ မိဘတွေကလည်း ကျောင်းထုတ်ခံရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ပြောတာကို လုံးဝ ယုံကြလို့တော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး သားသမီးတွေ ပြဿနာ မဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲဆိုပြီး ခွင့်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၈၈ မတိုင်ခင် တနှစ်၊ နှစ်နှစ် ကာလအတွင်း လယ်သမားတွေဆီက ၀မ်းစာစပါး တယောက် ၁၅ တင်းနှုန်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့စပါး အကုန်လုံးကို အစိုးရဆီ အကုန်သွင်းခိုင်းလို့ လယ်သမားတွေအတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်တွေမှာ စပါးဘယ်နှစ်တင်း သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သိအောင် စပါးကျီတွေမှာ ပေကြိုးတွေနဲ့ လိုက်တိုင်းပြီး ပိုနေရင်ပိုက်ဆံ ငါးပြားမှ မပေးဘဲလည်း အကုန်ယူမယ် အာဏာဖီဆန်မှုနဲ့ အရေးလည်း ယူမယ်ဆိုလို့ ဘယ်သူမှ တယောက် ၁၅ တင်းနှုန်းထက် ပိုမသိမ်းရဲခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်က စပါးတတင်းပေါက်ဈေးက ၄၅ ကျပ် ငါးဆယ်ကျပ် ရှိပြီး အစိုးရကို သွင်းရင် တတင်းကို ကိုးကျပ်နဲ့ သွင်းရပါတယ်။ တယောက် ၁၅ တင်းနှုန်းက ပိုတာကို အကုန် ကိုးကျပ်နဲ့ အစိုးရကို အဆပေါင်း ဆယ်ဆမျှ အနာခံပြီး သွင်းရတော့ လယ်သမားတွေ အားလုံးက အစိုးရကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်နေတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ သားသမီးတွေက အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာကို ရွာကမိဘတွေက လွယ်လွယ်နဲ့ ခွင့်ပြုခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရွာသားတွေက အစိုးရကို မုန်းတော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိသလို ကျွန်မတို့ မြို့ကကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက နေ့စဉ် ပုံမှန် မနက် ဆန္ဒပြသွားပြီး ညနေပြန်တာ ဘယ်သူမှ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မအကိုကြီးက စစ်တပ်ကခွင့်ယူပြီး အိမ်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်နေလို့ ကျွန်မအတွက် ပြဿနာ ပေါ်စရာကို ဖြစ်လာစေတယ်။ တရွာလုံးက ဘာမှမပြောတော့ ကျွန်မကိုကြီးလည်း အများနဲ့လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စမို့ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ဆန္ဒပြရင် အော်တဲ့ စလိုဂမ်မှာ ပြည်သူ့တပ်မတော် --- ဒို့တပ်မတော် ဆိုတာလည်း ပါနေတော့ ဘာမှတော့ မပြောပေမဲ့ မကြည်တာကတော့ သိသိသာသာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်မက သစ်ပင်ကြီးကြီးတွေမှာ ပြည်သူလူထုကို နိုးဆော်တဲ့ စာရွက်တွေ လိုက်ကပ်ရင် သူကနောက်ကနေ လိုက်ခွာတယ်။ ညည်းတို့အော်တဲ့အထဲမှာ ပြည်သူ့တပ်မတော် ဒို့တပ်မတော် ဆိုတာလည်း ပါတာပဲလား၊ ပြည်သူ့ချီးထုပ် ဒို့ချီးထုပ် ဆိုတာကော မပါဘူးလားနဲ့ လိုက်သရော်တာတွေ လုပ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အရေးအခင်းမှာ ပါလာတယ်ဆိုတာ ဘီဘီစီက ကြေညာလို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါလာလို့ ကျွန်မတို့က ၀မ်းသာအားရ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘီဘီစီနဲ့ အင်တာဗျူးဖြေနေတာကို နားထောင်ပြီး ဒီကောင်မ နှုတ်သီးကောင်း ရှာပါးဖြစ်ဖို့များတယ် အင်တာဗျူးဖြေတဲ့ လေသံက ရန်ဖြစ်နေသလို ကက်ကက်ကိုလန်နေတာပဲလို့ ကျွန်မတို့ကို အရွဲ့တိုက်ပြီး လိုက်ပြောတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရွာသားတွေက ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက် သူတို့မှာ ရွေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး တက်တဲ့အစိုးရက ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘာမှ တတ်မနိုင်ဘူး ကံပဲ ဆိုတဲ့ သဘောထားရှိသူတွေ ဖြစ်တယ်။ တရွာလုံးက ဘာမှမပြောဘဲ ပြဿနာ မရှာကြတော့ ကိုကြီးလည်း ကျွန်မတို့ အရေးအခင်းမှာ ပါနေတာကို သဘောမတူပေမဲ့ သရော်တာကလွဲပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားတာမျိုးတော့ မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တနေ့ညနေတော့ ကျွန်မက ၈ ရက်နေ့က ကျွန်မတို့ဆီမှာသာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ တခြားမြို့ကြီးတွေမှာ စစ်တပ်က အဖြူအစိမ်းဝတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်လို့ သေခဲ့တာ အများကြီး ရှိကြောင်း၊ ၆၂ ခုနှစ်ကနေ အခုထိ ဒီလိုပဲ အပြစ်မရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပစ်သတ်နေတာ အခုတော့ ဒီအစိုးရကို ဘယ်လိုမှ သီးခံနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးလို့ အိမ်က အိမ်သားတွေကို ပြောပြနေတာကို ကိုကြီးကကြားပြီးတော့ ဗကပ UG တွေကို ပစ်တာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်လို့ အရယ်တ၀က်နဲ့ သရော်ပြီး ၀င်ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မဒေါသကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းမနိုင် ဖြစ်ပြီး "ကိုကြီး အဲဒါရီစရာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မ ဗကပဆိုတာ ကြားပဲကြားဖူးတယ် တခါမှကို မတွေ့ဖူးဘူး ဒါဆိုရင် အခုကျွန်မတို့က ဆန္ဒပြနောတကိုကော ဗကပယူဂျီတွေလို့ ပြောချင်သေးလား ကျွန်မတို့အခုဆန္ဒပြနေတာကို စစ်တပ်က ပစ်ရင် ဗကပယူဂျီမို့ ပစ်တယ်လို့ ပြောဦးမလား" လို့ မေးတော့ သေချာတာပေါ့ ညည်းတို့က ဗကပ အကြိုက် လုပ်နေတော့ ဗကပယူဂျီနဲ့ ဘာကွာလို့လဲ၊ စစ်တပ်က အမိန့်ပေးရင် ပစ်မှာပဲ ငါ့ကိုအမိန့်ပေးရင်လည်း ငါပစ်မှာပဲ စစ်တပ်က ပစ်တာ ပစ်တဲ့သူမှာ အပြစ်မရှိဘူး နင်တို့မှာပဲ အပြစ်ရှိတယ်" တဲ့။
ဒေါသထွက်နေအချိန်မှာ အခုလို ထပ်ကြားလိုက်ရပြန်တော့ "ဒါဆို ကိုယ့်ညီမကိုလည်း ကိုယ်သတ်မယ်ပေါ့လေ ဘာပြည်သူ့တပ်မတော်သားလဲ ပြည်သူ့တပ်တော်သား မဟုတ်တော့ဘူး အပေါ်က သခင်ရှူးတိုက်တိုင်း လိုက်ကိုက်တတ်တဲ့ စစ်ခွေးတွေ ဖြစ်သွားပြီ" လို့ ကျွန်မ ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မဆီက စစ်ခွေးဆိုတာကြီးကို ကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မကိုကြီးဟာ မျက်နှာပြင်တခုလုံး နီရဲလျက် "ညည်းဘာပြောတယ် ဘာပြောတယ်" လို့ ပြောပြီး ဒေါနဲ့မောနဲ့ ကျွန်မဆီကို ပြေးဝင်လာပြီး လက်သီးနဲ့ မျက်နှာကို တချက် ဆွဲထိုးလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် ထပ်ထိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေလာဆွဲလိုက်လို့ တန့်သွားပြီး ညည်းပြန်ပြောစမ်း ပြန်ပြောစမ်းနဲ့ ပြောပြီး ကျွန်မကို လာထိုးဖို့ အမေ့လက်ထဲက ရုန်းထွက်နေတယ်။
ကျွန်မလည်း ခုနက သူပြောလို့ ဒေါသထွက်နေချိန် အသားနာတော့ ပိုဒေါသထွက်ပြီး "ပြောတယ် စစ်ခွေးတွေ၊ စစ်ခွေးတွေ၊ စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတောင်မှ ရိုးရိုးစစ်ခွေးမဟုတ်ဘူး ခွေးရူးတွေ စိန်လွင်ခွေးရူး နေ၀င်းခွေးရူး" ဆိုပြီး သူ့မျက်နှာကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်ပြီး ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ဆက်တိုက်အော်ပြောလိုက်တယ်။ သူကလည်း အမေဆွဲထားရာက ရုန်းထွက်လာပြီး ကျွန်မကို လက်သီးနဲ့ နောက်ထပ် သုံးချက်ဆက်တိုက် ထိုးလိုက်တာ ကျွန်မဦးလေးတွေ လာဆွဲတဲ့အထိပဲ။ ကျွန်မလည်း အသားနာလေ ဒေါသထွက်လေ ဖြစ်ပြီး ကြောက်စိတ်ဆိုတာ လုံးဝမရှိတော့ဘဲ သူတချက်ထိုးရင် စိန်လွင်ခွေး၊ နောက်တချက်ထိုး ရင်နေ၀င်းခွေး ခွေးရူးဆိုပြီး ဆက်တိုက်အော်နေခဲ့တယ်။
ဆွေမျိုးတွေက သူ့ကို ကျွန်မတို့အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ အဖွားတို့အိမ်ကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး ဖြောင်းဖြနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလည်း မထူးတော့ဘူး ဆိုပြီး တယောက်တည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂက သပိတ်စခန်းဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်းရှိရာ မြို့ကို သွားဖို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာခဲ့တယ်။ အမေနဲ့ ဦးလေးက ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်လာခေါ်လို့ လမ်းတ၀က်မှာ မီသွားတယ်။ ကျွန်မလည်း "မလိုက်ဘူး လာမခေါ်နဲ့ သပိတ်စခန်းကို ရောက်အောင်သွားမယ် အဲဒီမှာပဲ နေပြီး တိုက်ပွဲဝင်မယ် ဒီမိုကရေစီမရမချင်း အိမ်ကို လုံးဝမပြန်ဘူး သေရင်လည်း သေသွားပါစေ။ ဒီမျက်ခွက်ကြီးကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြည့်ချင်ဘူး" လို့ ပြောရင်းငိုချလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ငါ့အသားနာသလို သူ့အသား နာစေရမယ်လို့လည်း ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ပြောပြီး အမေနဲ့ ဦးလေးကိုလည်း ပြန်မလိုက်ဖို့ ငြင်းနေတော့ အမေက "နင့်ကိုကြီးကို အဖိုးအဖွားအိမ်မှာပဲ နေဖို့ ပြောထားလိုက်ပြီ သူ့အ၀တ်အိတ်တွေပါ ယူသွားပြီ ပြန်လိုက်ပါ" ဆိုပြီး အတင်းပဲ ခေါ်နေတယ်။ ပြန်မလိုက်ရင်လည်း ဦးလေးနဲ့ တခြားတယောက်က ကျွန်မကို အတင်းဆွဲပြီးခေါ်မယ်ဆိုတာ သိနေတော့ ကျွန်မလည်း လေသံနည်းနည်းလျှော့ပြီး "အဲဒီစစ်ခွေးမျက်နှာကို သမီးလုံးမမြင်ချင်ဘူး ပြဿနာထပ် လုပ်ရင်တော့ သမဂ္ဂက လူတွေကို ကျွန်မကို လာခေါ်ဖို့ လူကြုံနဲ့ မှာလိုက်ပြီး သူ့ကို ဂလဲ့စားချေပြီးမှ သပိတ်စခန်းကို သွားမယ်" လို့ ပြောပြီး ပြန်လိုက်လာတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ အဖေဆီရောက်ပြီး ကျွန်မကို အဖေကိုယ်တိုင် သမဂ္ဂကို သွားအပ်ပေးခဲ့လို့ ပြဿနာက ပြီးသွားတယ်။ (ဒီအကြောင်း တခါက ကျွန်မရဲ့ ဇာတ်လိုက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
ပြဿနာ အေးသွားတယ် ဆိုပေမဲ့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အကိုကြီးဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်က ကျွန်မမှာ လုံးဝမရှိတော့ဘဲ မျက်နှာကို လက်သီးနဲ့ လေးချက်ထိုးလိုက်တာကို တွေးတိုင်း ဘယ်လိုမှ အခဲမကျေနိုင်ဘူး။ သူအမြဲတမ်းဆိုလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မလည်း တော်တော်လေးကိုကြိုက်လှတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ လေညာအရပ်ကအချစ်ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတောင် လုံးဝကြားလို့ မရတော့လောက်အောင် သူ့ကိုမုန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို ကြားတိုင်း သူ့ပုံကိုပဲ မြင်ယောင်နေလို့ ဒေါသအမြဲထွက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလောက်တောင်ပဲ အသိဥာဏ် နည်းရတာ ဘကြောင့်ပါလိမ့်လို့ ကျွန်မစဉ်းစားရင်း ရင်နာလို့ကို မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မသိတဲ့သူမို့ ဗကပ ယူဂျီလို့ သံသယရှိနေလို့ဆိုရင်တော့ ထားလိုက်တော့ လုံးဝမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သူသိနေတဲ့ သူ့ညီမဆန္ဒပြတာကိုတောင် စစ်တပ်က ပစ်ရင် ဗကပအားပေးမို့ ပစ်တဲ့ စစ်တပ်မှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်ရလောက်အောင် အသိတရားနည်းတဲ့ အဖြစ်ကို ဘယ်လိုမှ သီးခံခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်း မရှိဘူး။
စစ်တပ်ထဲကို ၀င်ကတည်းက အခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ ၀င်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ဘဲ ဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့လို့ သူတပ်ထဲဝင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တွေးနေခဲ့တယ်။ သူစစ်တပ်ထဲ ၀င်ရတာကလည်း အဖေတို့တုန်းကလို သေပါစေကွယ် ဒို့အသက်ကို ဖက်ရွက်မှတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကအတိုင်း တိုင်းပြည်ကို ချစ်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို အဖေရိုက်လို့ အဖေကို စိတ်နာပြီး အိမ်က ထွက်ပြေးသွားလိုက်တာ ၆ လလောက်ကြာတော့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်ချင်လို့ မိဘထောက်ခံစာ လိုလို့ အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ အဖေကိုယ်တိုင် လက်မှတ်လိုက်ထိုးပေးပြီး စစ်တပ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်လို့ စစ်သားဖြစ်သွားတာ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့မှမဟုတ်တာ ဘာဂုဏ်ယူစရာ ရှိလို့လဲဆိုတဲ့ အတွေးပဲ ၀င်ပြီး အရင်က ဂုဏ်ယူနေတာတွေ အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။ ဘာပြည်သူ့တပ်မတော်သားလဲ ဒီလောက်အသိတရားနည်းရတာ ဆိုပြီး ဘယ်လိုမှ ဖြေလို့မရဘူး။ အဲဒီပြဿနာ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်မအကိုကြီးကို တချိန်က ကျွန်မ သိပ်အထင်ကြီးခဲ့တာတွေ ကျွန်မမှာ ဘာမှတခုမှမကျန် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
တကယ်တတော့ ကျွန်မအကိုကြီး သူစစ်တပ်ထဲမှာ ရှိနေစဉ် အိမ်မှာ သူ့ကို စာရေးအဆက်အသွယ် လုပ်သူဆိုလို့ ကျွန်မတယောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖေလည်း လေးငါးခြောက်လကြာမှ တခါလောက် စာရေးတတ်ပြီး ကျွန်မပဲ တလတခါလောက် စာရေးတယ်။ အဲဒီအရေးအခင်းကြီး မဖြစ်ခင် သူရောက်ခါစမှာတော့ သူပြောပြတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေ၊ ရှေ့တန်းမှာ သက်စွန့်ဆံဖျား ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေဖြစ်တဲ့ သူ့တပ်ထဲက အတွေ့အကြုံတွေ ရင်သပ်ရှုမော နားထောင်ရတာဟာ တထောင့်တညပုံပြင်တွေကို နားထောင်ရတာနဲ့တောင် လဲနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒီလိုနားထောင်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကျွန်မအကိုဟာ ဒီလိုသက်စွန့်ဆံဖျားလုပ်ခဲ့ပါလားဆိုပြီး ဂုဏ်ယူလိုက်ရတာလည်း ကျွန်မကို ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထစေတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ စာဖတ်ဝါသနာပါမှန်း သိတော့ သူဗိုလ်လောင်းဖြေဖို့ ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေ၊ တပ်မတော်စာစဉ်တွေကို ကျွန်မ ဖတ်ဖို့ဆိုပြီး ကျွန်းသေတ္တာကြီးနဲ့ သယ်လာပေးတာကို ကျွန်မမှာ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရတာလည်း အမော၊ တပ်မတော်စာစဉ် တခုထဲမှာတော့ အလင်းဝင်လာတဲ့ ကချင်တော်လှန်ရေးသမားလေး တိမ်ကော့နော်ဂျာအကြောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းသစ်နဲ့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ရေးတဲ့ သားမောင်စစ်သည်သို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေဆို ကျွန်မ အခုထိမှတ်မိနေတုန်းပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ကချင်တော်လှန်ရေး ရှိတယ်ဆိုတာ သူယူလာတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြီးမှ ကျွန်မသိခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်နေ၀င်းစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း သမိုင်းတွေကို ကျွန်မက ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေထက် ပိုသိလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြရင် ဒါငါ့အကို ဗိုလ်လောင်းအဖြေခင် ဖတ်ရတဲ့ ဗဟုသုတွေပေါ့လို့ ဂုဏ်ယူပြီး ပြောပြကာ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို လက်တဘက်ပေးပြီး ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အကိုတယောက်အတွက် ဂုဏ်ယူပြီး ကြွားခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက သူကကျောင်းသားတွေကို ဗကပယူဂျီလို့ ပြောပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်မကို ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းတော့ အမှတ်ရစရာ ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ် ရင်ထဲမှာ လုံးဝမကျန်ခဲ့ပါဘူး။ စက်တင်ဘာမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်မတို့ တောထဲရောက်တော့ ကိုကြီးက လက်မှာ ဒါဏ်ရာရလို့ လက်တဘက် သေထားတာကို အကြောင်းပြပြီး ပင်စင်လျှောက်ထားတာ ကျလာလို့ အိမ်မှာပြန်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ တောထဲရောက်ပြီး ကျွန်မတို့ တပ်ရင်းက ABSDF တပ်တွေ ရှေ့တန်းပြန်ဆင်းတော့ အမေက ကျွန်မတို့ စစ်ကြောင်း ရောက်နေတယ်လို့ ကြားရတိုင်း ကျွန်မကို မကြာခဏ လာတွေ့တတ်တာကို ပျော်၍မရသော အမေနေ့အတွေး ပို့စ်မှာ ဖေါ်ပြဖူးပါတယ်။ တခါတော့ ဒီလိုပဲ ကျွန်မတို့ စစ်ကြောင်းက ရွာတရွာမှာ တည်းနေစဉ် အမေရောက်လာတယ်။ ခါတိုင်းလိုပဲ ရွာသားတွေကို ဆေးကုပေးနေတာကို တခြားဆေးမှူးတွေနဲ့ လွှဲပေးလိုက်ပြီး အမေနဲ့တွေ့ဖို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ တည်းနေတဲ့ အိမ်အောက်ကို ပြေးဆင်းပြီး အမေကို တွေ့ပါတယ်။ သာလားမာလား နှုတ်ဆက်စကားတွေ ပြောပြီးတာနဲ့ အမေက "မီးငယ် နင့်အစ်ကိုကြီးလည်း ပါလာတယ် ဟိုဘက်အိမ်မှာ စောင့်နေတယ် ဟိုဘက်အိမ်ကို သွားရအောင်" လို့ ကျွန်မတို့ စစ်ကြောင်းက ရုံးအဖွဲ့တပ်မှူးတွေ ရှိတဲ့အိမ်ကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး ပြောတော့ ကျွန်မဖြင့် သူကျွန်မကို လာတွေ့လို့ရဲတာကို အံ့သြလို့မဆုံး ဖြစ်ရတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်မကို လက်သီးနဲ့ လေးချက်ထိုးထားတာကိုလည်း သုံးနှစ်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ မျက်စိထဲမှာ မနေ့ကလိုပဲ ချက်ချင်း ပြန်မြင်လာပြီး ဒေါသပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် "အမေက အဲဒီမဆလကို ဘာလို့ခေါ်လာရတာလဲ သူကကော ဘာလို့လိုက်လာရတာလဲ ဆိုတာ နားလည်လို့ကို မရဘူး။ အမေသူ့ကို သမီးလုံးဝတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး၊ တွေ့စရာ အကြောင်းလည်း မရှိဘူး၊ စကားလည်း ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး၊ လိုက်လာရဲတာ အံ့ပါရဲ့ သူ့အကြောင်း သမီးပြောပြထားလို့ ဒီစစ်ကြောင်းက ရဲဘော်တွေလည်း အကုန်လုံးသိထားတယ်၊ ရဲဘော်တွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရင် သမီးတာဝန်မယူဘူးနော့် အခုပြန်ခေါ်သွား" လို့ပဲ ကျွန်မ အမေ့ကို ဆက်တိုက် ပြောနေခဲ့တယ်။
ပို့စ်ရှည်သွားလို့ ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်မယ်၊ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမယ်
ဒုတိယပိုင်းကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: ABSDF တောတွင်းဘ၀ပုံရိပ်,ခံစားမှု
March 21, 2011 at 1:40 AM Reply
March 21, 2011 at 3:38 AM Reply
fb မှာ share လိုက်တယ်အစ်မငယ်နိုင်ရေ။
March 21, 2011 at 3:39 AM Reply
မငယ်နိင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုလေးစားပါတယ်....
March 21, 2011 at 4:12 AM Reply
March 21, 2011 at 4:49 AM Reply
အရေမရ အဖတ်မရ သောက်တင်း သောက်ဖျင်းတွေပဲပြောနေကြတာမြင်လို့ ဘာမှ မပြောပဲ ဒီအတိုင်းနေခဲ့တာ။ အခုတော့ ၀င်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရင် ဒေါသထွက်ကြတာချည်းပဲ။ ညီမကို ပစ်သတ်မယ်ဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ပြောတာပါ။ အဲဒါနဲ့ အစ်ကိုအရင်းကို ခွေးနဲ့နှိုင်းရတယ်လို့ဗျာ။ ကိုယ့်အစ်ကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမ ဘယ်အဆင့်မှာ ရှိလဲပြန်တွေးဦး။ နောက်ပြီး အဲဒါကို သောက်ရှက်မရှိ လူတကာ လိုက်ပြီး အထုတ်ဖြီပြတယ်ဗျာ။ အစ်မသားက အစ်မကို အမေလိုသဘောမထားပဲ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောခံရတာ နည်းသေးတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
March 21, 2011 at 5:40 AM Reply
မငယ်နိုင် က ရေးမဲ့ရေးတော့လဲ အရှည်ကြီးပါလားနော်...စောင့်မျှော်လျက်
March 21, 2011 at 6:28 AM Reply
March 21, 2011 at 7:00 AM Reply
အရေးအသားတွေ ကောင်းတယ် အစ်မရေ... (စိတ်ပျက်ဖို့)
March 21, 2011 at 8:38 AM Reply
ရတယ်မောင်ပါလ ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ညတုန်းက fb မှာ တင်မလို့ကို အိပ်ငိုက်လို့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုမှ တင်ရမယ်။ အဲဒါတွေက ကျွန်မဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုတွေပါ။
March 21, 2011 at 1:29 PM Reply
မငယ်နိုင် ကိုယ်တွေ တကယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။၀မ်းလည်း ၀မ်းသာပါတယ်။အမ တို့အိမ်မှာတောင် မူက ၂ မျိုးကွဲနေတာ....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပဲ.. အမ လဲ အမအကို့ ကို အပြစ်မြင်တယ်ဆို တာက အရင်တုန်းက မဖြစ်ဘူး အဲကျမှ ဖြစ်လာတာဆို့ တော့ ....ရှင်းရှင်းပြောရရင် သာမာန် လူတွေဟာ လူတယောက်ကို ကြည်မရတော့ဘူးဆို ရင် အဲလူ ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမမြင်တော့ဘူး။ထို့ အတူ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ကြည့် ရပြီဆိုရင် အဲလူဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်နေတက်တာ လူသဘာဝပါ။အမှန်နေသင့်တာက ၂ ဘက်လုံး ဆွေးနွေးပြီးတော့ သင့်တင့်မျှတစွာ နေထိုင်သင့်ပါတယ်... ၂ ဘက်လုံးလိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးပါပဲ။မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် အထင်ပေါ့ ၇၀ % လောက်က လူသားချင်း စာနာမှူ၊လူတန်းစားမခွဲခြားမှူ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စသဖြင့် ..... အများကြီးပေါ့.... အဲလို့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေက အုပ်ချုပ်မယ်ဆို၇င် .........ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျော်၇ွှင်စွာနဲ့နေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
March 21, 2011 at 1:31 PM Reply
ကျွန်တော် နာမည်တက်ပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့ error တက်နေလို့Anonymous နဲ့ ရေးလိုက်တာပါ
March 21, 2011 at 1:49 PM Reply
မောင်.... ချိတ်ထမီ ၀တ်မလား??? အိမ်မှာတော့ မင်းညီမ ကျန်သွားလို့ ချိတ်ထားတဲ့ ထမီရှိတယ်
March 21, 2011 at 2:27 PM Reply
မငယ်နိုင် အပေါ်က comment mg ဆိုတာ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့ မယားပါသားလေး ရေး သွားတာပါ။
March 21, 2011 at 3:00 PM Reply
March 21, 2011 at 3:13 PM Reply
March 21, 2011 at 4:42 PM Reply
စစ်တပ်က တရားဝင်သေနတ် ကိုင်ခွင့်ပစ်ခွင့် ရှိတာကိုးကွာ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့ မလဲ ဒီလိုပဲဝဋ်ခံနေရမှာပေါ့နောက်ထပ်ဘယ်နှနှစ်အထိ ၀ဋ်ဆက်ခံ နေရမလဲမသိသေးဘူး။ ပြန်တော့ လည်မှာပါ ဘုရာရှင် တောင်မှရှောင်လွှဲ လို့ မရတာပဲ။
March 21, 2011 at 4:56 PM Reply
စစ်ခွေးတွေက ဟိုဖက်ပို့စ်ကနေ ဒီဘက်ပို့စ်အထိ ရောက်လာကြပါလား။ ကိုယ့်အစ်ကိုအကြောင်း ကိုယ်ရေးတာတောင် သူတို့အပူပါသေးတယ်။ အိုးမပူဘဲနဲ့ စလောင်းပူတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလားမသိဘူး။ စစ်ခွေးတို့ရေ လိင်အကြောင်း ခါးအောက်ပိုင်းအကြောင်း မရေးရ မနေနိုင်ရင် ငါ့ဘလော့၈်မှာ စာလာမရေးနဲ့ နင်တို့အတွက် အရင် Templete နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ကို အပိုင် ပေးထားပြီးပြီ ငါ့Templete အသစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ စစ်ခွေးခြေရာ လုံးဝမရှိစေရဘူး။ အကုန်ဖျက်မယ်။ ပေါ်က မှတ်ချက်နှစ်ခုမှာ တခုက Facebook မှာ မြင်ဖူးတယ်။ အဲဒါကို ပြန်ကူးပြီး အဲဒီ မှတ်ချက်ကို ရေးတဲ့သူရဲ့ Facebook ကို ရှာပြီး ပြန်ပို့ပေးပြီးမှ ဖျက်မယ် တခုကိုတော့ အခုဖျက်လိုက်ပြီ။ စစ်ခွေးတွေကို ငယ်နိုင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်နေတယ်။ စစ်ခွေးကို ပြောလို့ နာတဲ့သူတွေ သေလိုက်ကြ၊ လဲသေလိုက်ကြ။ စစ်ခွေးလည်း ခွေးနာတဲ့သူလည်း ခွေးပဲ။
March 21, 2011 at 5:08 PM Reply
အမည်မရှိရေ ...အေးကွာ မင်းတို့လို သန်းရွေထောက်တိုင်၊ သူခိုးလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာနေရဲတာ မဆန်းတော့ မဆန်းပါဘူးကွာ။ မင်းတို့စားနေရတဲ့ ထမင်းတလုပ်အတွက်မင်းတို့လိပ်ပြာသန့်ရဲ့လားမင်းတိုသမိုင်းကိုမင်းတို့အရိုင်းခံမှာလား။ အေးမင်းတို့ကစစ်အစိုးရအတွက်ကာဘာလုပ်ပေးနေတာ ဘာအတွက်လဲ မင်းနေရာအတွက်လား တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ် ဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေရပ်လိုက်ကွ။
March 21, 2011 at 5:17 PM Reply
March 21, 2011 at 5:27 PM Reply
March 21, 2011 at 6:53 PM Reply
ကောင်းပေမယ့် မျက်စိစပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ ဘလော့လေးကတော့ကောင်းပါတယ် ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုပဲပေါ့ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ကိုယ်စိတ်နဲ့ကို ကိုယ်အယူအဆနဲ့ကိုပဲပေါ့ အကောင်းမြင်စိတ်လေးတော့ထားပေါ့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်
March 21, 2011 at 7:35 PM Reply
@မောင်နိုင်... ကျွန်တော် ခင်များရဲ့ အဲလို အရေးအသား အဲလိုအပြောလေးတွေတော့ မြင်ဘူးတယ်ဗျ။ မျက်စိစူးရင်လဲ လာမဖတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
March 21, 2011 at 8:22 PM Reply
ဘာမှ လွန်လွန်ကျူးကျူး စော်ကားပြောတဲ့ စကားလုံးမပါဘူး။ မျက်စိစူးတာလောက် ပြောတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး အမြင်မှန်ရစေချင်သူ။
စစ်ခွေးတွေ ရန်စပြီး လာဟောင်သွားတာ၊ လာဆဲသွားတာ၊ လာတိုက်ခိုက်စော်ကားသွားတာနဲ့ သူများနာမည်ယူပြီး ရေးသွားလို့ ဖျက်လိုက်ရတဲ့ မှတ်ချက်တွေပဲ ပြောစရာ ရှိတယ်။ စစ်ခွေးတွေ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ကိုယ့်အစ်ကိုအကြောင်း ကိုယ်ရေးတာ သူတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲမသိဘူး။ မဆီမဆိုင် လာဆဲတဲ့သူနဲ့ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း လာစော်ကားတဲ့သူနဲ့ နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်ကို အလကား လာယူနေကြတာ တော်တော်ဟာသ နိုင်တာပဲ။
March 21, 2011 at 8:58 PM Reply
March 21, 2011 at 9:11 PM Reply
စစ်ခွေးတွေ တော်တော် အားနေပုံရတယ်။ ဘလော့ဂ်ကိုလည်း သူတို့ပဲ ပြည့်တန်ဆာခန်းလုပ်ပြီးလို့ မကျေနပ်သေးဘူး ဘလော့ဂ်မှာလည်း လာဟောင်နေ လာဆဲနေသေးတယ်။ သူတို့ မကောင်းကျိုးပေးတိုင်း ငယ်နိုင်မှာ မရသွားလို့ တော်တော်လေး ခံရခက်နေပုံရတယ်။ မင်းတို့ စစ်ခွေးတွေ လုပ်လိုက်မှ ငါ့ဘလော့ဂ်က အခု ၂၄ နာရီ ပြည့်ဖို့ ၃ နာရီတောင် လိုသေးတယ် လာလည်သူဦးရေ 1042, Hit 2401 ဖြစ်နေပြီ။ မင်းတို့ လာဒုက္ခပေးပြီးမှ ငါ့ဘလော့ဂ်က အဲလောက် လူများများ စာလာဖတ်တာ ၀မ်းတော့ ၀မ်းသာတယ်။ အသက်လေးဆယ်မကလို့ ၈၀ ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ၁၀၀ ပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ဒီလုပ်ရပ်မျိုးကို ငါက ဘယ်တော့မှ ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ မကျေနပ်ရင် လဲသေလိုက်ပါ။
March 21, 2011 at 11:29 PM Reply
March 21, 2011 at 11:31 PM Reply
((စစ်ခွေးတွေ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ကိုယ့်အစ်ကိုအကြောင်း ကိုယ်ရေးတာ သူတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲမသိဘူး။))
March 21, 2011 at 11:57 PM Reply
March 22, 2011 at 12:36 AM Reply
March 22, 2011 at 1:12 AM Reply
March 22, 2011 at 5:25 AM Reply
သူတို့ကရေးလိုက် မနိုင်က ပြန်ရေးလိုက်နဲ့ သပွတ်အူ လိုက်နေတယ် ပြန်လှန်ပြီး မရေးပါနဲ့တော့ဗျာ ဖျက်တော့ ဖျက်ပေါ့နော့ ။ ပေါက်တက်ကရရေးတဲ့ လူတွေကို ပြောပါမယ့် မကျေနပ်ရှိခဲ့ရင် ဂဂဏန ပြန်ဖြေ ရှင်းပြပါ ၊ ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်းရေးရင် ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်းပဲ ပြန်အရေးခံရပါမယ့် သူ့ရေးတဲ့ ပိုစ့်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ရင်
သွားမဖတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ ဟုတ်လား ကျနော်ပြောတာ သဘာဝကျပါတယ်နော့...
March 22, 2011 at 9:26 AM Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားထူးရေ မနေ့က ဘုရားမရှိခိုးခင် ကွန်ပြူတာ ဖွင့်မိတော့ အကုသိုလ်တွေ အလုံးလိုက်အခဲလိုက် တွေ့ပြီး အဲဒီအကုသိုလ်ကြောထဲကို အစ်မလည်း ခဏ ရောက်သွားမိတယ်။ အဲဒီ အကုသိုလ်ကြောထဲ ပါသွားပြီး မနေ့က ဘုရားတောင် မရှိခိုးဖြစ်လိုက်ဘူး။ သတိဆိုတာ ပိုတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူးဆိုတာ အမှန်ပဲ။ သတိကို တချက်လေး လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူများအကုသိုလ်တွေက ကိုယ့်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ သိပ်ကိုလွယ်ပါတယ်။ သားထူး မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမ... မင်္ဂလာပါ။ အမဆိုက်မှာ ပို့စ်လာဖတ်ရင်း.... အမဆိုက် ခေါင်းစီးနားက
(marquee)စာတန်းပြေးတာလေး သဘောကျလို့ ကူယူသွားသေးတယ်။
အမ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ချွေလျက်
Benjamin Fulford on Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Fulford
Benjamin Fulford : HAARP is an Illuminati Earthquake machine used in Japan http://www.youtube.com/watch?v=cRNyte66LTQ
Invisible Empire A New World Order http://www.youtube.com/watch?v=NO24XmP1c5E
March 22, 2011 at 9:36 PM Reply
ဟိုတရက်က မငယ်နိုင် ဘလော့ဂ်အတုအလုပ်ခံရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြားသိရတာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူကပဲ လုပ်လုပ် ရှုံ့ချရမယ့် ကိစ္စရပ် တခုပါပဲ။ ဘယ်သူလုပ်တယ် ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ လုပ်တဲ့လူမှ တပါး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တော့ သူ့မှာ ကြောက်စရာဆိုလို့ သူ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မငယ်နိုင်လဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ကို ကြည်ညိုတဲ့သူ တယောက် အနေနဲ့ အကြောင်းနဲ့ အကျိုးကို ဆင်ခြင် သုံးသပ်မိမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ နာမည်ဖျက်ခံရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နှိပ်စက်ကလူ အပြုခံရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ့် ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ တရားသဘော နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အကြောင်းရှိလို့ အကျိုး ဖြစ်ရတာပါ။ မငယ်နိုင်အနေနဲ့လဲ အတိတ်ဘဝတွေရဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုလို တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ခံရတာဆိုတာကို သိရှိမယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။ မငယ်နိုင်အနေနဲ့ "သူတို့ မကောင်းကျိုးပေးတိုင်း ငယ်နိုင်မှာ မရသွားလို့" လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။ ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ သူတို့ပေးတဲ့ မကောင်းကြောင်းတွေကို မငယ်နိုင် ယူနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ မှားသွားရင်တော့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကွန်မန့်တွေကို တုံ့ပြန်တဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေမှာ ဒေါသတွေ ပါနေတယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိခံစားသိရပါတယ်။ သူများရဲ့ စကားကြောင့် ကိုယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က ရှုံးနိမ့်သွားပြီဆိုတာလေးကို သတိကပ် စေချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူဘာပြောပြော တုံ့ပြန်ဖို့ကို အလျင် မတွေးဘဲ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ် ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်သွားနိုင်ဖို့ဟာ အဓိကပါ။ ကျွန်မ လာလည်ရင်း လမ်းကြုံလို့ မေတ္တာများစွာဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမ နန်းထိုက်ကေခိုင် - ညီမ ပြောတဲ့ သဘောတရားတွေက ဘုရားတောင်မှ ရှောင်လွဲလို့ မရတဲ့ ကံအကျိုးပေးတွေပါ။ ဘ၀ဆိုတာကို ရထားတဲ့သူတွေ အားလုံးကတော့ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးဆိုတဲ့ သံသရာ ၀ဋ်ကြွေးကြောင့်သာ ဖြစ်နေ ရှိနေရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်မှာ မိမိအပေါ် ရိုက်ခတ်လာတဲ့ ကံကို အဲဒါ အတိတ်ကံကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီး ကံသေကံမအနေနဲ့ ထားလိုက်ဖို့တော့ ဘုရားမဟောခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို ထိုးနှက်လာတဲ့ ပြဿနာတခုကို ပြန်ဖြေရှင်းရမှာပဲ။ ဒီလို တုံ့ပြန်ရာမှာ ဘုရားရဟန္တာတွေလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သူတွေလည်း မဟုတ်တော့ မေတ္တာပါရမီ၊ ခန္တီပါရမီက ပုထုစဉ်တွေအနေနဲ့ ဒီလောက်အထိ မရင့်ကျက်နိုင်တာတော့ အမှန်ပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူပေးတဲ့ လက်ဆောင် (ဆိုး) ကို သတိလက်လွတ်ကာ တုံ့ပြန်ရင်းနဲ့ အနည်းအကျဉ်း ယူမိပြီး ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ်။ ဒါက စိတ်မှာ တဒင်္ဂဖြစ်လာတဲ့ ခဏတာသာ ဖြစ်တယ်။ စိတ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှု အလျင်က ရုပ်ထက် ပိုပြီးမြန်တယ်ဆိုတာ ဘုရားအဟော ရှိတော့ သူတို့ပေးတာကို အစ်မ ဒေါသအလျောက် တုံ့ပြန်မိရင်တောင်မှ အဲဒီဒေါသကို အစ်မ အကြာကြီး မရလိုက်ပါဘူး။ ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ တော်ကြာ ပျက်သွားတာပဲ။ တကယ်သူတို့ရဲ့ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ အစ်မဘလော့ဂ်ကို လူအထင်သေးပြီး မလာအောင် လူအယုံအကြည်မှုကင်းအောင် လုပ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လုံးဝ မအောင်မြင်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်လိုက်မှ ဘလော့က ပိုအောင်မြင်လာတာတော့ အမှန်ပဲ။ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ Templete အဟောင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုမြင်ပြီး လူတွေက သူတို့ဘယ်လောက် အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာကို သိကြမှာ ဖြစ်လို့ သူတို့လုပ်လိုက်တာ သူတို့အတွက် အကျိုးယုတ်တာပဲ ရှိတယ်။ အကျိုးရတာ ဘာမှမမြင်ဘူး။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
March 23, 2011 at 12:47 PM Reply
နောက်တခေါက်ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုလိုက်တဲ့ သဘောက ပြန်မဖြေရှင်းဖို့အတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ရေးသားဖို့ သင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တခုပါ။ ပါရမီအကြောင်း ပြောလာလို့ အနည်းငယ် ထပ်ဖြည့်ဆွေးနွေးလိုပါတယ် အမ။ ပါရမီဆိုတာကလဲ ကိုယ်တိုင်က ဖြည့်ဆည်းရတာ မဟုတ်ပါလား။ ကိုယ်တိုင်က ဖြည့်ဆည်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြည့်ဆည်းမှသာလျှင် တဖြေးဖြေးနဲ့ ပါရမီတွေပြည့်ဝလို့ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်ကို မျက်မှောက်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာ အားလုံးဟာလဲ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရခြင်းသဘောသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ လောဘ၊ဒေါသတို့ရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် အကုသလကံတခု ကိုယ့်မှာ ကျန်နေခဲ့မှာပါ။ အဲဒီ့အကုသလကံအကျိုးဆက်ကို ခံစားရမှာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အတုလုပ်သူတွေရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ဟာ အမကို သူများမလေးစားအောင်၊ ဘလော့ဂ်ကို လူအထင်သေးအောင် မလာချင်အောင် လုပ်တယ် ဆိုတာလဲ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ အဲဒီ့လုပ်ရပ်ဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့ အဓိက ဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မငယ်နိုင်အနေနဲ့လဲ နာမည်ရပြီး ဘလော့ဂါ တယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် မငယ်နိုင်ဟာ အဲ့သလို ဗီဒီယိုတွေကို တင်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ထင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစုံတယောက်ရဲ့ ပယောဂသာ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကို တွေးမိကြသိမိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုလဲ လုပ်သူတွေဘက်က ကြိုတွေးမိမှာပါပဲ။ (ကျွန်မအမြင်ပါ) ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ မငယ်နိုင်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဖို့နဲ့ ဒေါသဖြစ်စေဖို့၊ သူတို့အတွက် အချိန်တွေ ပြန်ပေးပြီး အခြားအရေးကြီးတာတွေကို ပျက်ကွက်စေဖို့သာ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မထင်မိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မအောင်မြင်ဖို့ရာ မငယ်နိုင်ကို မေတ္တာနဲ့ အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် အမရေ...
March 23, 2011 at 2:00 PM Reply
နန်းထိုက်ကေခိုင် ကရော စလစ်အတုလေးလား။။။။ အင်း အတုတွေများတဲ့ ခေတ်မှာ သတိတော့ထားပါ မငယ်နိုင်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင်၊ လုပ်သာလုပ်။ ဘာမှ အတွေဝေနဲ့၊ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
March 23, 2011 at 2:09 PM Reply
နန်းထိုက်ကေခိုင်က အတုမဟုတ်ဘူး သူကျွန်မဘလော့၈်မှာ အရင်ကလည်း စာလာဖတ်ဖူးတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်မတန် ဗဟုသုတရှိတဲ့ မိန်းကလေးတဦးပါ။ သူ့ကို အထင်မလွဲပါနဲ့။
March 24, 2011 at 7:03 AM Reply
ခင်ဗျာက သူများကိုတော့ စော်ကားတယ်...
ကိယ်ကို စော်ကားမှ ကျတော့ အသေကြောက်
ပြောင်းလိုက်တော့ ဗျာ...ရယင်ရ မရယင်ဖျက်
ရယင်ရ မရယင်ဖျက်တဲ့ မငယ်နိူင်ရေ...
March 24, 2011 at 4:01 PM Reply
လူလတ်....မင်းမှာလဲ လူတကာရန်လိုနေပါလားကွာ။ မင်းလိုငါလယ်လို ဆူံးမထားလဲ။
March 24, 2011 at 8:25 PM Reply
ဆောရီးပါ မောင်လူတ် မှတ်ချက်တွေကို လုံးဝမဖျက်ပါဘူး ဒီအတိုင်းပဲ ထားပါတယ်။ ဖျက်တာက မိတ်ဆွေစာရင်းကပဲ ဖျက်တာပါ။ (((‎(((((ခင်ဗျာ မှာ မျှတတဲကစိတ်ရှိယင်တော့
ကျွန်တော်....တို့ ပြန်လည်စော်ကားတာကို....ခံနိူင်ဖို့... ပြင်ဆင်ထားပါ..))))) ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး လုပ်တဲ့သူကိုပဲ ပြောပါတယ်လို့ ရှင်းပြလျက်နဲ့ ဒီလို လာခြိမ်းချောက်သွားတဲ့စကားက မိတ်ဆွေတွေကြားမှာ ပြောရမည့် စကားတွေမှ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ မိတ်ဆွေဖြစ် မိတ်ဆွေအင်္ဂါနဲ့ မညီလို့ မိတ်ဆွေစာရင်းက ဖြုတ်တာ ဘာမှ မမှားပါဘူး။ ပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တခုကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို ခြိမ်းချောက်မှုကြောင့်မှ ငယ်နိုင် ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
April 1, 2011 at 1:03 AM Reply
Simple Views ဘလော့မှာ စီဘောက် ဖြုတ်ထားပြီး
ကွန်မန့်မှာလဲ Approval Control ခံထားလို့
SV ကို ဆဲလို့ မရတော့လို့
ရုရှားက စစ်ခွေး တုတ်ကြီးက
မငယ်နိုင် ဘလော့မှာ မငယ်နိုင်ကို လာဆဲနေတာကိုး
>> စစ်မုန်း .....
စစ်မုန်း ပြောတာ မှန်တယ်..
SV ဘလော့မှာ C-Box ဖြုတ်ထားပြီး ကွန်မန့် approval
ခံထားလို့ ရုရှက တုတ်ကြီးက SV ကို ဆဲလို့ မရတော့တာ..
ရုရှက တုတ်ကြီးက SV ကို ဆဲတာ မတွေ့ရတော့တာရဲ့
အကြောင်းရင်း အစစ်အမှန်က အဲဒါပဲ..
ဒါကို SV ဘလော့မှာ ((SLIP ရှိနေလို့ SV ကို လာအော်ကြမှာ
မဟုတ်တော့ဘူး)) ဆိုပြီး မမှန်မကန် ရေးထားတယ်..
ရုရှက တုတ်ကြီးက SV ဘလော့မှာ SLIP ရှိနေလို့
SV ကို မဆဲတာ မဟုတ်ဘူး..
SLIP ရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို SV ဝင်သွားပြီးတဲ့ အချိန်အထိ
SV ဘလော့မှာ SLIP ရှိနေရဲ့နဲ့ တုတ်ကြီးက SV ကို ဆဲနေတာပဲ..
SV ဘလော့မှာ C-Box မဖြုတ်ခင်၊ ကွန်မန့် approval မခံခင်
နောက်ဆုံးအချိန်အထိ တုတ်ကြီးက SV ကို ဆဲခဲ့တာပါ..
SV ဘလော့မှာ C-Box ဖြုတ်ပြီး ကွန်မန့် approval ခံလိုက်လို့
SV ကို ဆဲလို့ မရလို့ အစ်မငယ်နိုင်ကို လာဆဲတာ..
ဒီလို အောက်တန်းကျကျ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုနေတဲ့
စစ်ဗိုလ်မျိုးကို တပ်ထဲမှာထားတော့ တပ်နာတာပေါ့..
ဒီလို လမ်းဘေးစရိုက်စစ်ဗိုလ်မျိုးကို နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားပြုတဲ့
ပညာတော်သင် လွှတ်တော့ တိုင်းပြည်နာတာပေါ့..
မငယ်နိုင်ကို ထပ်တလဲလဲ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲဆိုစော်ကားနေသော ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး ဆဲသမျှ ပြန်၍ မခံရပါစေနှင့်။ တုတ်ကြီး ဆဲသမျှ တုတ်ကြီး၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ပြန်၍ ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။ တုတ်ကြီးသည်လည်း အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပါစေ။ ကားမတိုက်ပါစေနှင့်။ မြွေမကိုက်ပါစေနှင့်။
အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေကချေများ၏ စကား အသုံးအနှုန်းကို သုံးကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆဲဆိုနေသော ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး ဆဲသမျှ ပြန်၍ မခံရပါစေနှင့်။ စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး၏ ဆဲဆိုသော စကားလုံးများသည် တုတ်ကြီး၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ပြန်၍ ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး ဆဲဆိုစေရန် စေခိုင်းသော အာဏာရှင်ဘက်သားများနှင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အားပေးသော ရုရှားက စစ်ဗိုလ်များ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ပြန်၍ ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီးက ရက်ရှည်လများ နှမချင်း မစာမနာ ဆဲဆိုလာသည်ကို "မည်သူမျှ အကျိုးမရှိသော ဆဲဆိုခြင်းကို မလုပ်သင့်ကြောင်း" တတန်းတည်းသား စစ်ဗိုလ်သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ကျိုးကြောင်းပြ ဖြောင်းဖြကာ တားဆီးနိုင်ပါလျက် မတားဆီးပဲ ကြိတ်ပြီး ဝမ်းသာနေသော ရုရှားက စစ်ဗိုလ်များ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ပြန်ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီးက စဉ်ဆက်မပြတ် မောင်နှင့်နှမ၊ သားနှင့်အမိ မကြားဝံ့ မနာသာ ဆဲဆိုလာသည်ကို တုတ်ကြီးထက် တဆင့်မြင့်နှင့် အထက် စစ်ဗိုလ်များက တပ်တွင်း ထက်အောက် အမိန့်နာခံမှု အရ လွယ်လင့်တကူ ဟန့်တားနိုင်ပါလျက် မဟန့်တားပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ သွယ်ဝိုက်ပြီး အားပေးနေသော ရုရှားကစစ်ဗိုလ်များနှင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မြှောက်ပေးနေသော ရုရှားကစစ်ဗိုလ်များ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ပြန်ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
မိသားစုဝင်တစ်ဦး၏ အသက်နှင့် ရင်းပြီး သိလာရသော အာဏာရှင်ဘက်သားများ၏ ရက်စက်ဆိုးယုတ်မှု၊ မတရား အနိုင်ကျင့်မှု၊ ဥပဒေမဲ့ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှု နှင့် အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူ့ ဘဝမှန်များကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြနေသော မငယ်နိုင်ကို ခွေးနှင့် ရှုးတိုက်သလို စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီးကို ငွေနှင့် အခွင့်အရေး ပေးပြီး ဆဲခိုင်းသော အထက်လူကြီးများ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမ၊ သမီး၊ တူမ၊ မြေးမများကို ပြန်၍ ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
ပြည်သူ့ ဘက်သားများက အာဏာရှင်၏ မတရားမှုများကို အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်များကို ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဆရာကြီးလေသံဖြင့် လူတတ်ကြီး လုပ်ကာ တက်တက်စင် လွဲမှားနေသော နိုင်ငံရေးအသိအမြင်၊ နည်းနည်းလေးမှ သုံးမရသော အတွေးအခေါ် နှင့် လုံးဝ သဘာဝမကျသော အူကြောင်ကြောင် ငြင်းချက်များဖြင့် အာဏာရှင်ဖက်မှ မိုးကြိုးပစ်ရာ ထန်းလက်နှင့်ကာသည့်နှယ် လိမ်ညာ ကာကွယ်ပေးသော်လည်း စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီးက မကြားဝံ့မနာသာ ဆဲရေးတိုင်းထွာ၍ အရပ်ရပ်နေပြည်တော် ကြားလို့မှ မတော် ဖြစ်နေသည်ကို တခွန်းတပါဒမျှ မပြောဆို မကန့်ကွက်ပဲ ရေငုံ နှုတ်ပိတ်ခြင်းဖြင့် သွယ်ဝိုက် ထောက်ခံနေသော စစ်ဗိုလ် Slip ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
ရုရှားက ပညာတော်သင် စစ်ဗိုလ် တုတ်ကြီး၏ ဆဲဆိုသော စကားလုံးများသည် ပြည်သူ့ ဘက်သားများကို ရန်သူသဖွယ် သဘောထားကာ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်နေသော အာဏာရှင်ဘက်သားများ၏ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ၊ ညီမများကို ဝဋ်မလည်ပါစေနှင့်။
(((အရေမရ အဖတ်မရ သောက်တင်း သောက်ဖျင်းတွေပဲပြောနေကြတာမြင်လို့ ဘာမှ မပြောပဲ ဒီအတိုင်းနေခဲ့တာ။ အခုတော့ ၀င်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရင် ဒေါသထွက်ကြတာချည်းပဲ။ ညီမကို ပစ်သတ်မယ်ဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ပြောတာပါ။ အဲဒါနဲ့ အစ်ကိုအရင်းကို ခွေးနဲ့နှိုင်းရတယ်လို့ဗျာ။ ကိုယ့်အစ်ကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမ ဘယ်အဆင့်မှာ ရှိလဲပြန်တွေးဦး။ နောက်ပြီး အဲဒါကို သောက်ရှက်မရှိ လူတကာ လိုက်ပြီး အထုတ်ဖြီပြတယ်ဗျာ။ အစ်မသားက အစ်မကို အမေလိုသဘောမထားပဲ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောခံရတာ နည်းသေးတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။)))
21/3/11 က ထည့်ထားပြီး Sparm ထဲ ၀င်နေလို့ အခုမှ ထည့်ပေးရတဲ့ မှတ်ချက်ပါ။ Anonymous ရေ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးတာ ဘာဒေါသ ထွက်ရမယ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သင်ပေးထားတာလား။ ဘာဒေါသ ထွက်စရာလိုလို့လဲ။ လက်ခံရင်လည်း ဘာကြောင့်လက်ခံတယ် လက်မခံရင်လည်း ဘာကြောင့် လက်မခံဘူးဆိုတာ မိမိဆန္ဒကို ရဲရဲဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကျတော့ မိမိလက်ခံမခံ ဆိုတာထက် အများဆန္ဒကို ယူရတာပဲ ရှိတယ်။ မိမိဆန္ဒကိုအများလက်မခံလည်း ဆုပ်ကိုင်ထားပိုင်ခွင့် ရှိပြီး တနေ့ အများလက်ခံလာအောင် အမြဲတမ်း မှန်ကန်တဲ့ နည်းနဲ့ အများကို စည်းရုံးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဒေါသထွက်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ တသက်လုံး မှတ်ထားပါ။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက လက်ထပ်သင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရင် ဒေါသထွက်ရမယ်လို့ ဒီလိုပဲ ပုံသေ မမှတ်ထားပါနဲ့။ Anonymous တို့ကို Brainwash လုပ်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အမှားကြီးသင်ပေးထားတာကို အမှန်မယူပါနဲ့။ ကျမအစ်ကိုဘက်က နာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျမသားက ကျမကို အမေလိုသဘောမထားဘူးဆိုတာ ဘယ်အချက်ကို ပြောတာလဲ။ သားကအမေကို ပြောတဲ့အထဲမှာ မှားနေတာဘာပါလို့လဲ။ ဘာကြောင့် မှားတယ်ထင်လဲ။ အမေကို ဒီလိုမပြောရဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောလဲ။ ဖြေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပေမဲ့ ငယ်နိုင်လည်း ဆရာကြီးလေသံနဲ့ မေးခွန်းမေးလို့ တတ်တယ်ဆိုတာ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ လာရေးသွားတဲ့ Anonymous ကို အသိပေးတာ သက်သက်ပါ။ ပို့စ်ကို ဖတ်သွားတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
April 21, 2011 at 8:09 PM Reply
ဆုတံဆိပ်ရသော သြစတြေးလျ ကြည်းတပ်ဖွဲ့ဝင် ခွေး
Tuesday, 19 April 2011 19:00 | Print E-mail
တော်ဝင်တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ခရမ်းရောင် ကြက်ခြေခတ် တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသော ခွေးမလေး စာဘီ (ညာ အောက်ဘက် ထောင့်မှ တံဆိပ်နှစ်ခုမှာ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်သဖြင့်ရသော ဆုတံဆိပ်နှစ်ခု ဖြစ်သည်။)
သြစတြေးလျကြည်းတပ်တွင် အမှုထမ်းနေသော ပေါက်ကွဲစေသော ပစ္စည်းများအား အနံ့ခံသော ခွေးကလေး စာဘီ (Sarbi) သည် အာဖဂန်နစ္စတန် စစ်မြေပြင်မှ တစ်နှစ်ကျော် ပျောက်ဆုံးသွားရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး တော်ဝင်တိရစ္ဆာန်ညှဉ်းပန်းမှု ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ကြီး (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)) ၏ အမြင့်ဆုံးရဲစွမ်းသတ္တိရှိသော တိရစ္ဆာန် ခရမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ် တံဆိပ်(Purple Cross) ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကင်ဘာရာ (Canberra) မြို့ရှိ သြစတြေးလျစစ် အထိမ်းအမှတ် ဗိမာန် (Australian War Memorial) တွင် ကျင်းပသော အခမ်းအနားအတွင်း ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိ Labrador ခွေးမျိုးနှင့် Newfounland ခွေးမျိုးစပ်ထားသော ခွေးမလေး စာဘီ (Sarbi) အား ခရမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ် တံဆိပ် (Purple Cross) ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
သူမသည် လူသားများအကျိုးအား ပြောင်မြောက်စွာသယ်ပိုးသော တိရစ္ဆာန် အဖြစ် ခရမ်းရောင် ကြက်ခြေခတ် တံဆိပ် (Pupple Cross) ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသော ကိုးကောင်မြောက် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ စစ်အတွင်း စွမ်းဆောင်ချက်အနေနှင့်မူ သူမသည် ဒုတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ ပထမ ကမ္ဘာစစ်တွင် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် မာဖီ (Murphy) အမည်ရှိ လားတစ်ကောင်သည်လည်း ၎င်းဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရသည်။
စာဘီ (Sarbi) သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း သြစတြေးလျနှင့် အာဖဂန် စစ်သားများ ပါဝင်သော တပ်ဖွဲ့ အိုရုစဂန် (Oruzgan) စီရင်စုနယ်တွင် ကင်းလှည့်စဉ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမတို့အဖွဲ့အား အာဖဂန်သူပုန်များက တိုက်ခိုက်သောအခါတွင် သြစ တြေးလျ တပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးယောက်ဒဏ်ရာရ၍ ခွေးမလေး စာဘီ (Sarbi) မှာလည်း ပျောက် ဆုံး သွားခဲ့သည်။ သူမအား တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့ရတော့ သောအခါ “တိုက်ပွဲတွင် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း” (Missing in Action – MIA) သတ်မှတ်လိုက် ရသည်။
သူမပျောက်ဆုံးပြီး ၁၃ လ အကြာတွင် အိုရုစဂန် (Oruzgan) စီရင်စုနယ်၏ ခေါင်သော အပိုင်း တွင် အမေရိကန်ကြည်းတပ်၏ အထူးတပ်မှ စစ်သားတစ်ယောက်သည် ဒေသခံ လူများနှင့် အတူ Labrador ခွေးအမဲတစ်ကောင်အား တွေ့လိုက်ရာ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် အကြာတွင် သြစတြေးလျမှ အနံ့ခံခွေးတစ်ကောင် ပျောက်ဆုံးကြောင်း ပြန်၍သတိရတော့ သည်။ အမေရိကန်တို့သည် စာဘီ (Sarbi)အား တာရင်း ကောက် (Tarin Kowt) ရှိ သြစတြေးလျ စခန်းသို့ ပြန်ပို့ပေးလိုက်သည်။
သူမ၏ မိုက်ကရိုချစ် (Microchip) အား စစ်ဆေးရာ (Scan) တွင် စာဘီ (Sarbi) ဖြစ် ကြောင်း သေချာသွားသည်။ တပ်ကြပ်ကြီး “ဒီ” (Sergeant D)ဟုသာ သိရသော သူမ ၏ သခင်သည်လည်း ၎င်းသတင်းအား သိရသောအခါ ဝမ်းသာသွားသည်။ သူမအား ဒူဘိုင်း (Dubai) တွင် လအတန်ကြာ သီးခြားထား (Quarantine) ပြီးနောက် ရောဂါမရှိသဖြင့် သြစတြေးလျသို့ ပြန်ပြီး တပ်ကြပ်ကြီး “ဒီ” (Sergeant D) နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံ ကြရသည်။
ခွေးမလေး စာဘီအား လည်တွင် ခရမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ် ဆုတံဆိပ် ဆွဲလျက်တွေ့ရပုံ
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ကြည်းတပ်စစ်ဦးစီးမှူး (Chief of The Army) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကဲန် ဂေးလက်စပီ (Lieutenant General Ken Gillespie) တက်ရောက်သော အခမ်းအနား တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ RSPCA အမျိုးသမီး ဥက္ကဋ္ဌ လင်း ဘရက်ရှော (Lynne Bradshaw) က ခွေးမလေး စာဘီ (Sarbi) အား ခရမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ် တံဆိပ် (Purple Cross) ကို ချီးမြှင့်ပေးသည်။
ခွေးမလေး စာဘီအား တပ်ကြပ် အက်ဒမ် အိတ်စဲလ်ဘီ (Corporal Adam Exelby) နှင့်အတူတွေ့ရစဉ်။
၎င်းဆုတံဆိပ်နှင့် အမည်တူယိုးမှား ခရမ်းရောင်နှလုံးသား ဆုတံဆိပ် (Purple Heart) မှာ ရန်သူလက်ချက်ဖြင့် ဒဏ်ရာရသူနှင့် ကျဆုံးသူတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမြှင့်သော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ဆုတံဆိပ်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ခရမ်းရောင်နှလုံးသား ဆုတံဆိပ် (Purple Heart)
တော်ဝင်တိရစ္ဆာန်ညှဉ်းပန်းမှု ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသော တိရစ္ဆာန် ခရမ်းရောင်ကြက်ခြေ တံဆိပ်(Purple Cross)
Bomb-sniffing dog's awardacross to bear (The Sydney Morning Tribune)
Brave army dog Sarbi wins Purple Cross (Yahoo, The West Austalia)
Australian sniffer dog given Purple Cross bravery award (BBC News)
May 5, 2011 at 2:00 AM Reply
အစ်မ Nge Naing ကျွန်တော်နည်းပညာေ၇းနေ
ကျွန်တော် Babylon မှာကျွန်တော်ဆိုဒ်လေးကို
Comment ကိုအမ approve မပေးဖူးဆို၇င်လဲ
အမ..ဒါပေမယ့်အမ၇ဲ့ Comment တွေထဲက
နှစ်ဘက်မျှတွေးပေါ့အမ၇ယ်...အမေ၇းခဲ့တဲ့ကပို့ဒ်ထဲကလို့ပေါ့.." ကျွန်မဒေါသကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းမနိုင် ဖြစ်ပြီး "ကိုကြီး အဲဒါရီစရာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မ ဗကပဆိုတာ ကြားပဲကြားဖူးတယ် တခါမှကို မတွေ့ဖူးဘူး ဒါဆိုရင် အခုကျွန်မတို့က ဆန္ဒပြနောတကိုကော ဗကပယူဂျီတွေလို့ ပြောချင်သေးလား "
ကျွန်တော်ဒေါသမထွက်ခဲ့ပါဘူး..နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်... အမေ၇းခဲ့တဲ့ပိုဒ်ထဲကလိုပေါ့အမ "
ဒီလောက်တောင်ပဲ အသိဥာဏ် နည်းရတာ ဘကြောင့်ပါလိမ့်လို့ ကျွန်မစဉ်းစားရင်း ရင်နာလို့ကို မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မသိတဲ့သူမို့ ဗကပ ယူဂျီလို့ သံသယရှိနေလို့ဆိုရင်တော့ ထားလိုက်တော့ လုံးဝမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သူသိနေတဲ့ သူ့ညီမဆန္ဒပြတာကိုတောင် စစ်တပ်က ပစ်ရင် ဗကပအားပေးမို့ ပစ်တဲ့ စစ်တပ်မှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ထင်ရလောက်အောင် အသိတရားနည်းတဲ့ အဖြစ်ကို ဘယ်လိုမှ သီးခံခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ "
"လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သဘောထား ကွဲလွဲသည်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု မပါဘဲ ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာကိုသာ ဦးတည်ပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ရေးသားကြပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။ "
ကျွန်တော် facebook မှာစာတွေအများကြီး၇ိုက်ပြီးဆွေးနွေးဘူးပါတယ်..ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံး၇လဒ်ကတော့အဆဲခံ၇ခြင်းပါပဲ...
May 5, 2011 at 10:21 AM Reply
အတွေးသစ် စာလာဖတ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ယဉ်ကျေးစွာ မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်မအနေနဲ့ အရင်ပို့စ်တခုဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်အတုအတွက် ရှင်းလင်းချက်မှာ http://nge-naing.blogspot.com/2011/03/nge-naing.html ပြောထားတဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအပေါ် ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်းရော ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါ စောတကတက်ကြသူတွေ အားလုံးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြည့်စွက် ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီပို့စ်မှာ ဆက်ပြီး စောတကတက်ကြသူ အားလုံးနီးပါးကလည်း အရင်ပို့စ်ကနေ ရောက်လာသူတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အစ်မအနေနဲ့ မဆိုင်ဘဲ ထိခိုက်သူတွေကို ရှင်းပြသင့်တာ ရှင်းပြပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ကျေပါတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒါပြီး နောက်ပိုင်း ဆက်ပြီးထိခိုက်နေသူများအနေနဲ့ အစ်မက ဒါကို စစ်ခွေးတွေ လုပ်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုကို အစ်မယုံကြည်နေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ အခိုင်အမာ ပြောချင်ရင် မင်းတို့ချေဖျက်နိုင်မှသာ အစ်မမှားတယ်ဆိုတာ အစ်မလက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ အစ်မကို ပက်ပက်စက်စက် လာဆဲနေသူတဦးကို အစ်မ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြည့်တော့ သူဟာအစ်မထင်သလို မဟုတ်ဘူး သူကလည်း ဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အစ်မက သူထင်သလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတဲ့အတွက် တယောက်နဲ့တယောက် အမှန်အတိုင်းသိပြီးတာနဲ့ အပြန်အလှန်တောင်းပန်ပြီး ပြဿနာတခု ရှင်းသွားပါတယ် http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post.html မှာ တင်ထားပါတယ်။ အခုလည်း အဲဒီ ဘလော့အတုကို လုပ်တဲ့သူနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာ ရုရှားက စစ်ခွေး (စစ်ခွေးအဓိပ္ပါယ် ရှင်းထားပြီးပြီ) မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူကိုယ်တိုင် အစ်မနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး အကျိုးအကြောင်း သိရရင် စစ်ခွေးလို့ အထင်မှားခဲ့တာကို အစ်မပြန်တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး။ ပက်ပက်စက်စက် ဆဲခဲ့တဲ့သူကိုတောင် ကိုယ်မှားမှန်းသိရင် တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးတာ တခြားသူကိုဆိုရင် ပြောဖို့မလိုပါဘူး။ အရင်ပို့စ်အောက်မှာ ဖြည့်စွက်ခဲ့တဲ့ အောက်က ဖြည့်စွက်ချက်လေးကို ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက် (17/3/11 at 7:20 PM)
ဒီပို့စ်မှာ သုံးထားတဲ့ ရုရှားရောက် စစ်ခွေးတစု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရည်ညွန်းလိုတဲ့သူထဲမှာ မပါတဲ့သူတွေလည်း ထိခိုက်ခံစားရတယ်ဆိုတာ သိရလို့ များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပြီး ဒီအပိုဒ်ကို ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုတဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း သိရှိတဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုတော့ ချစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မမြင်နိုင်အောင် လိမ်လည်လှည့်ဖြား ဖုံးကွယ်ထားခြင်း ခံထားရသူတွေကို မဆိုလိုဘူး။ စစ်ခွေးဆိုတာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိုထက် ကိုယ်ကျိုးရှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပိုချစ်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် တရားသည်ဖြစ်စေ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ မျက်စိအသေမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ကာ (ဥပမာ ဘုန်းကြီး သတ်တာအပါအ၀င်) အကုန်မှန်တယ်လုိ့ သတ်မှတ်နေသူတွေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကိုသာ ရည်ညွန်းပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောလိုက်တဲ့ စစ်ခွေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက ခွေးသရမ်းကြီးနဲ့ နောက်လိုက်ခွေးတွေကို လိုက်ပစ်နေတဲ့ ခဲလုံးတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခွေးကိုပစ်နေမှန်း မသိလိုက်ဘဲ ပစ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းအပေါ် ရုတ်တရက် ရောက်လာပြီး မတော်တဆ ထိခိုက်သွားသူတွေအတွက် ကျွန်မ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတော့ နောက်ထပ် ဒီလိုမတော်တဆ ထိခိုက်မှုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဒီစာပိုဒ်က ခွေးပစ်နေကြောင်း သတိပေးချက် တခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီပို့စ်မှာ ရည်ရွယ်တဲ့ စစ်ခွေးက ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို အပြာကားတွေနဲ့ ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့ ခွေးတွေနဲ့ အားပေးသူများကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ ခွေးကို ပစ်နေမှန်းသိလျက်နဲ့ ခွေးမဟုတ်တဲ့သူတွေက ကြားကနေ လာခံနေရင်တော့ တကယ်စစ်ခွေးကတော့ အမြှီးတနှပ်နှပ်နဲ့ ပြုံးကြည့်နေမှာ သေချာတယ်။ တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ခွေးက သူ့ကိုယ်သူ သိပါတယ်။ အဲဒီခွေးကိုပစ်နေတဲ့ ခဲလုံး ခွေးဆီမရောက်အောင် ကြားကနေ ၀င်ခံပြီး အကာအကွယ် မပေးကြဖို့ လူစင်စစ်တွေကို ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
May 25, 2011 at 11:49 PM Reply
WOW just what I was searching for. Came here by searching for winter garden theater nyc
Feel free to surf to my blog post ... Male Edge
The actual ruсhed consistency acгoss the bοԁіce enables this particulaг to suit tοwards the women's form completely and also the tiered chiffon miniskirt truly provides an enjoyable experience in to this particular gown. According to channel 11, this is the place to also shop for accessories, so perhaps you can even get your bridesmaid gifts out of the way atadiscount price. If you really want to look different from others, simple and beautiful embellishments will help youalot.
September 4, 2015 at 9:26 AM Reply
September 9, 2015 at 3:13 AM Reply
September 11, 2015 at 1:27 AM Reply
November 21, 2015 at 1:05 AM Reply
November 28, 2015 at 1:41 AM Reply
February 21, 2016 at 1:38 AM Reply
February 21, 2016 at 2:04 AM Reply